‘मिस्टर झोले’ प्रचारमा किन छैनन् नायिका ? « Ramailo छ
‘मिस्टर झोले’ प्रचारमा किन छैनन् नायिका ?
पुष २८ देखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘मिस्टर झोले’ ले प्रचार प्रसारलाई तिव्रता दिइरहेको छ । अभिनेता दयाहाङ राई, निर्देशक रामबाबु गुरुङ, निर्माताहरु टेकेन खड्का र रौनक विक्रम कंडेल लगायतले सोमबार अनलाइन मिडियासँग अन्र्तक्रिया गरे । उक्त अन्र्तक्रियामा फिल्मका मुख्य दुई नायिकाहरु बर्षा राउत र दिया पुन भने देखिएनन् । आखिर कहाँ गए त फिल्म प्रचारको बेला बर्षा र दिया ?
‘दिया जी लण्डनबाट आउँदै हुनुहुन्छ, बर्षा भर्खरै अष्ट्रेलिया गइन्’, निर्माता टेकेन खड्काले भने । फिल्म रिलिज मिति नजिकिंदै जाँदा किन गइन् बर्षा अष्ट्रेलिया ? ‘पहिल्यै यता आउने भनेर पक्का भैसकेको थियो’, रमाईलो छ सँगको च्याटमा बर्षाले भनिन्, ‘अब सोशियल नेटवर्क बाटै फिल्मको प्रचार गर्छु ।’ उसो त आफु यता आउने कुरा निर्देशक रामबाबु गुरुङलाई जानकारी गराएको बताउँदै केही मिडियालाई अन्र्तवार्ता समेत दिएको बर्षाले खुलाइन् । फिल्मको प्रोमो हेर्नुस् :
यता निर्माता रौनक विक्रम कंडेल भने फिल्म रिलिजको बेला सबै कलाकार नभैदिएकोमा दुखेसो पोख्दै थिए । ‘खै पहिला त सबै हुन्छौं भन्थें अहिले को कहाँ को कहाँ ?’ निर्माता कंडेलले भने । यद्पी जो जहाँ भएपनि फिल्मको प्रचार गरेर दर्शकलाई हलसम्म तान्न युवा निर्माता कंडेलले आग्रह गरे । ओखती गीत हेर्नुस् :
सिनेमा आर्टस् र टेकेन खड्का प्रोडक्सनको संयुक्त प्रस्तुतीमा निर्माण भएको फिल्म ‘मिस्टर झोले’ सफल फिल्म ‘झोले’ को सिक्वेल हो । फिल्ममा दया, दिया र बर्षासँगै बुद्धि तामाङ, बिजय बराल, प्रविण खतिवडा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । बर्षाको जन्मदिनको रमाईलो भिडियो हेर्नुस् :